“ပုဆိုး”ပါတဲ့…ဗျာတို့။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ပုဆိုး”ပါတဲ့…ဗျာတို့။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Aug 14, 2011 in Copy/Paste | 21 comments
မြန်မာလူမျိုးများ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွင် ရှေးရှေးကာလများက တည်းက “လုံချည်” ခေါ်
“ပုဆိုး” “ထမီ” များဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်..ယခုကာလ၌ ၀တ်ဆင်ကြသော လုံချည်ပုဆိုးတို့ကို မည်သည့်
အချိန်က စတင် ၀တ်ဆင်ခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာများရှာဖွေသင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
“လုံချည်”ဟုခေါ်လျှင် ယခုခေတ် ယောက်ျားဝတ် နှင့် အမျိုးသမီး ၀တ်အားလုံးအား သိမ်းကြုံခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီ
“ပုဆိုး” ဟုခေါ်ဆိုလျှင် ယောက်ျားလေးဝတ်ဟုသိထားကြပြီး “ထမီ” ဟုခေါ်လျှင် မိန်းကလေးဝတ်ဟုသိထားကြပါတယ်
ယခင် သက်ဦးဆံပိုင် ရှင်ဘုရင်များလက်ထက်က ရှင်ဘုရင် မင်းညီမင်းသားများရဲ့ ပုဆိုးဟာ
အရှည်အတောင်နှစ်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပြီး သာမန် လက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားတွေရဲ့ ပုဆိုးဟာ
““ရှင်ဘုရင့် ပုဆိုး ပိုးချည်ပဲ”” ဆိုတဲ့ အရင်ကလူကြီးတွေ ပြောစကားအရ တော့
ရှင်ဘုရင်ရဲ့ပုဆိုးဟာ ပိုးသားစစ်စစ်တွေနဲ့သာ ရက်လုပ်ထားတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်
““အတောင်နှစ်ဆယ်ဝတ်မင်းယောက်ျား”” လို့ လဲ ယောက်ျားလေးများကို တင်စားတတ်ပါတယ်
ဒါကြောင့် ယောက်ျားချင်းတူတာတောင် မင်းမျိုးမင်းနွယ် မင်းယောက်ျားများသာ အတောင်နှစ်ဆယ်ပြည့်တဲ့
ပုဆိုးကိုဝတ်ကြတယ်ထင်ပါတယ် ဆင်းရဲသားများကတော့ ရိုးရိုးသာမန်ပုဆိုးကိုသာဝတ်စားခဲ့ပုံ ရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
နောက်တစ်ခုက ကောင်းကင်မှာတိမ်တောင်တိမ်လိပ်များပေါ် နေရောင်ချည်ဖြာကျတဲ့အခါမှာတော့
နတ်ပြည်ကနတ်သားများဟာလဲ ပုဆိုးဝတ်ဆင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ် နတ်သားများရဲ့ပုဆိုးဟာ
ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ဆိုတာတော့ တိကျတဲ့သက်သေ မရှိသလောက်ပါပဲ..။။။
ယခုခေတ်အချိန်အခါမှာတော့ ပုဆိုးကို အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဝတ်ဆင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စသည့်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဝတ်ဆင်ကြတာကိုတွေ့ဖူးးပါတယ် အခြားနိုင်ငံဒေသတွေမှာလဲ
အဓိကအချက်ကတော့ ယောက်ျားရယ်မိန်းမရယ်လို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဟိုးကမ္ဘာဦးအစမှာတော့ပုဆိုး ထမီ ဆိုပြီးရှိအုံးမှာ
မဟုတ်ပေမယ့် ပုဆိုးရယ်ထမီရယ် လို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာတော့ ယောက်ျား ၀တ်ကို “ပုဆိုး”လိုခေါ်ပြီး
မိန်းမ၀တ်ကိုတော့“ ထမီ” လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟာ
ဟောဒီကမ္ဘာမှာ လူအမျိုးမျိုး ဘာသာအထွေထွေ ရှိတဲ့ကြားမှာ ဒီလူမျိုး ဒီဘာသာ က ဒီပုံ ဒီဘာသာဒီလူမျိုး ကတော့ဒီပုံ နဲ့
ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုး ၀တ်ဆင်ကြခဲ့တာဟာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ ။ အနောက်နိုင်ငံ တွေက၀တ်တဲ့ ဘောင်းဘီလက်ရှည်ကတော့
မြန်မာဆန်ဆန်ပြောရရင် ““ အင်္ဂလိပ် ပုဆိုး””လို့ ခေါ်ရမှာပါပဲ။။။
တစ်ခုထူးခြားတာက ““ အင်္ဂလိပ် ပုဆိုး””ကို ယောက်ျားမိန်းမ အဆင်တူ ၀တ်ဆင်နိုင်ပေမယ့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ လုံချည် ကိုတော့ ယောက်ျားမိန်းမအဆင်တူ လိုက်ဝတ်လို့ မရနိုင်တာပါပဲ
။။။။။။။။ပုဆိုးနဲ့ထမီရဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်များကတော့ ။။။။။။။။။။
“နွေရာသီဆိုရင် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး အေးမြနေတတ်ပါတယ်
“၀တ်ဆင်ရာမှာ အကြီးအသေး ဆိုဒ်ခွဲ ပြီးရှာဝယ်စရာမလိုပါဘူး
“ခါးနံပါတ် မလိုပါ ဘူး
“အပေါ့အပါးသွားရာမှာ လွယ်ကူပါတယ် တစ်ချက်မ,လိုက်ရုံနဲ့ ကိစ္စပြီးနိုင်ပါတယ်
“အတွင်း အပြင် ခွဲခြားဝတ်ဆင်စရာမလိုခြင်းဟာ ထမီထက်ထူးခြားပါတယ်
“ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကြိုက်လို့ ရခြင်းဟာလဲ ထမီ ၀တ်တွေ ထက် ထူးခြားတဲ့အချက်ပါ
“လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလိုရင်တော့ လူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေရင် ကွင်းသိုင်းပြီးသွားလို့ရပါတယ်
“ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပစ္စည်းတွေအတွက်တော့ ခါးပုံစလေးလုပ်ပြီး ခါးပိုက်ဆောင်ထည့်သွားရုံပါပဲ
“နေပူတဲ့အခါမှာ ခေါင်းဆောင်းအဖြစ် အသုံးပြုလို့ရတာဟာလဲ ထမီတွေထက် ထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲ
“ပစ္စည်းများသယ်ပိုးရာမှာ မိန်းမအများစု ခေါင်းခု အဖြစ်ခွေပြီ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
“ကလေးသူငယ်မွေးဖွားခဲ့ရင်တော့ လုံချည်ဟာ ကလေးအိပ်စရာ ပုခက်အဖြစ် ထပ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်
“သိပ်ဟောင်းသွားရင်တော့လွင့်ပစ်စရာမလိုပါဘူး တိုင်လေးမှာကြိုးနဲ့ချည်ပြီးလက်သုတ်ဝတ် အဖြစ် ဆက်သုံးလို့ရပါတယ်
“သားသည် မိခင်တွေအတွက်တော့ ပုဆိုးဟောင်းလေးဟာ ကလေးအနှီး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တာပါပဲ
“ခြေသုတ်ပုဆိုးမြွေစွယ်ကျိုးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဟောင်းနွမ်းသွားရင် ခြေသုတ်စရာအ၀တ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ကြပါသေးတယ်
“ရဟန်းသံဃာများ ကြွရောက်လာခဲ့ရင်တော့ ပုဆိုးခပ်လတ်လတ်တစ်ထည်နဲ့ ခြေသုတ်ပင့်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
ဒါတွေဟာ ထမီနဲ့အသုံးပြုလို့ မကောင်းတဲ့ အရာတွေပါပဲ.. ပုဆိုးရဲထူးခြားချက်တွေပါပဲ….။။။။။။။
“လူကြပ်တဲ့ လိုင်ကားပေါ်မှာ အောက်ခံဘောင်းဘီမပါဘဲ ပုဆိုးဝတ်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်ကြောင့်မိန်းလေးအချို့
“ လေပြင်းပြင်းတိုက်ရင် ပုဆိုးကိုပေါင်နှစ်လုံးကြားညှပ်ပြီး ရပ်နေရတာလဲဒုက္ခတစ်ခုပါ
“ပစ္စည်းတွေ လက်အပြည့်ကိုင်ထားပြီးမှ ပုဆိုးပြင်ဝတ်ချင်တဲ့ ပြသနာကလဲရှိပါသေးတယ်
“ပြေးဟယ်လွှားဟယ် လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာ ပုဆိုး မနေရတာလဲ သူရဲ့ဒုက္ခပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ပုဆိုးဝတ်ရမယ့် ကိစ္စအချို့ကြောင့် ပုဆိုးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေဆဲပါ
အလှူ အတန်းမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အခါဖြစ်စေ..ဘုန်ကြီးကျောင်းဥပုဒ် စောင့် သွားတဲ့အခါဖြစ်စေ
ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာမှာဖြစ်စေ ..အခြားအခြား ဘောင်းဘီဝတ်လို့မရအောင်
မသင့်တင့်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက်တော့ ပုဆိုး ဟာသူ့နေရာနဲ့သူ ၀တ်နေကြရဦးမှာပါ….။။။။
နေရာတော်တော်များများ လူတော်တော်များများရဲ့ ခါးမှာတော့ အထက်ကပြောခဲ့သလို ဘောင်းဘီလက်ရှည်ဖြစ်တဲ့
““အင်္ဂလိပ် ပုဆိုး””များကသာ နေရာယူလာကြပါကြောင်း ……ပုဆိုးအကြောင်းပါတဲ့….ဗျာတို့။။။။။
အလုပ်သွားတဲ့အချိန်သာ ဘောင်းဘီဝတ်တယ် ကိုယ့်အိမ်ပြန်ရောက်ယင်တော့ ပုဆိုးဘဲဝတ်တယ် ဘောင်ဘီဝတ် ရတာစိတ်ကျဉ်းကျပ်တယ် ပုဆိုးဝတ်တာဘဲကြိုက်တယ် ။ တခါက တရုတ်ပြည်မှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ အသက်၆၀ကျော်အဖိုးကြီးတရုတ်ပြည်ကိုအလည်ပြန်လာတာတွေ့ဘူးတယ် ကျွန်တော်တို့ကလဲကိုယ့်နိုင်ငံကအလည်လာတယ်ဆိုတော့ သွားတွေ့ကြတာပုဆိုးဝတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပါလေရော ..ဦလေးဒီရောက်တာတောင်ပုဆိုးဝတ်တုန်းဘဲလားဆိုတော့ …တစ်လမ်းလုံးစိတ်ကျဉ်းကျပ်လာတာ ခုမှဘဲသက်တောင့်သက်သာရှိတော့တယ်လို့ပြောသံကြားဘူးတယ်။။
ပုဆိုးမှာ ခါးနံပါတ် မလိုဆိုပေမဲ့ အနံကြီး အနံသေးကွာသေးတယ် မဟုတ်လားဗျ။ သွားလေသူ အဆိုတော် စိုးလွင်လွင်သီချင်းမှာတောင် ‘အနံကြီးပြီးကွင်းကျယ်တဲ့ လူတွေနဲ့ စကားမပြောချင်ဘူး’ လို့ဆိုထားတဲ့ စာသားရှိသေးတယ်လေ။ (ထမီလည်း ထိုနည်း၎င်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
လူကြားသူကြားထဲ ပုဆိုးထမီပြင်ဝတ်တာ မြန်မာအချင်းချင်းမှာ မသိသာပေမဲ့ သဂျီးတို့လို နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်မှာ ရယ်စရာ ရိုင်းစရာ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်တတ်တယ်။
နေရောင်အောက်မှာဆိုရင်လည်း ခေါင်းလောင်းကြော်ငြာ ဖြစ်တတ်တယ်။
လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါ ဘောင်းဘီထက် ပိုပြီးဖိုသီဖတ်သီ ဖရိုဖရဲအဖြစ်များတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ပုဆိုးမဝတ်တော့တာ မြန်မာပြည်ကထွက်လာကထဲက၊ ညအိပ်ရင်တောင် မဝတ်တော့ဘူး၊ သူများတွေဝတ်ရင်လည်း မျက်လုံးထဲ အံမဝင်တော့ဘူး။ မိန်းခလေးတွေ ထမီဝတ်ရင်တော့ အားနွဲ့သူတွေမို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်။ အိမ်နေရင်းဝတ် ဘောင်ဘီအပွ၊ ညအိပ်ဝတ် ပဂျားမားဘောင်းဘီ အပွ၊ ချည်သားအထူနဲ့ ဆောင်းတွင်းဝတ် ဘောင်းဘီအတို အရှည်အပွတွေကို ဝတ်ရတာ သဘောကျနေပြီ။
ဘီလူးကတော့ အင်္ဂလိပ် ပုဆိုးပဲ ၀တ်တယ်
အင်္ဂလိပ် ပုဆိုး ၀တ်တာကြာတော့
မြန်မာပုဆိုးကို သေသေသပ်သပ် မ၀တ်တတ်တော့ဘူး
အိမ်မှာလဲ ရေလဲ ပုဆိုးအစုတ်တစ်ထည်ပဲရှိတယ်
ပုဆိုး အဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့ ဂင်းနစ် ၀င်ချင်ပါတယ်..ဗျား။။
အင်္ဂလိပ်ပုဆိုးက ခရီးဝေး သွားလို့ လမ်းဘေးမှာ အပေါ့အပါးသွားချင်ရင် တော်တော်ခက်တယ်ဗျ။
လမ်းဘေးခြုံတိုးပြီး ပုဆိုး အဟကောင်းလို့ ကျွတ်တွယ်မှာတော့ မမြင်ဘူး…။
ဘယ်နိုင်ငံကို ပဲသွားသွား၊ ခဏပဲသွားသွား၊ ကြာကြာပဲသွားသွား ကျွန်တော့် အတွက် မပါမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ပုဆိုးပါ။
ပင်ပင် ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်က နေ အိမ်ပြန် ရောက်တဲ့အခါ ရှူးဖိနပ်ကျပ်ကျပ် ခြေအိတ်ထူထူ လည်စည်းတင်းတင်း ကုတ်တောင့်တောင့်
ဘောင်းဘီထစ်ထစ် အတွင်းခံပိတ်ပိတ် တွေကိုချွတ် (ရေချိုး) စွတ်ကျယ် အဟောင်းလေးနဲ့ လျှော်ဖွတ်ပြီးသား ချည်လုံချည်တစ်ပတ်နွမ်း
ချောချော မီးပူနံ့သင်းသင်း မွှေးမွှေးလေးကို လဲ ပြီးဝတ်လိုက်ရတဲ့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါး ပြေလျော့ နှစ်သိမ့်ကျေနပ် တင်းတိမ် သွားရတဲ့
အ၇သာကို ဘောင်းဘီနဲ့ မလဲနှိုင်ပါဘူး။ အရင်ကပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အသားကောင်းကောင်း မန်းတလေး ရှပ် ကော်လာနှင့် (သို့) လယ်ကတုံး
အဖြူကို အောက်က ရိုးရာကွက် ကချင်ရေစို မှိုင်းမှိုင်း ၊ ရခိုင်ပုဆိုး ရင့်ရင့်၊ ယော ဂန့်ဂေါ အညို အနက် ပေါ်မှာ ချည်ဖြူ ထိုး အရုပ်စုံ လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ၀တ်ခဲ့၇တဲ့ လန်းဆမ်း ပျိုမြစ်မှု၊ အသားဖြူဖြူ ညိုညို တော်တန်ယုံ( အ၇ုပ်ဆိုးတဲ့ aksweတို့လို)ယောက်ျားလေးတွေတောင် ကြည့်ကောင်း ရှုပျော် နဲ့ ကျက်သရေ ရှိသွားတဲ့ လိုက်ဘက်တင့်တယ် မှုကို ခုထိ စွဲလမ်းမက်မောနေဆဲပါ။
ဒီဆိုက်ရဲ့ အထင်ကရ ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်
သူများကိုသာပြောတာ ကျုပ်လည်း ပုဆိုးမဝတ်တာ အတော်ကိုကြာခဲ့ပါပေါ့လား
စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတော့ ပုဆိုးကြီးနဲ့ဆို သိပ်မဂွတ်ထဘူးဗျ
ထိုင်နေပြီးပြန်ထရင် ပုဆိုးတွေထမီတွေ ဖင်ကြားညှပ်နေတတ်တာကလည်း ခရိုက်စစ်တစ်မျိုးဘဲဗျ
ဘောင်းဘီလက်ရှည်နဲ့ရှိုးတွေမိုးတွေအပြည့် နေတဲ့အချိန် အရေးပေါ်အီးပါခြင်ရင်လည်း ခရိုက်စစ်ဘဲ
တစ်နေကပေါ့ အဲ့လိုဘဲ ဘွတ်တွေရွှတ်တွေနဲ့ သွားတုန်း အီးပါခြင်ပါလေရော
ကမန်းကတန်း ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ရ ဖိနပ်ကိုချွတ်ရ ဒါနဲ့ဘောင်းဘီကို တံခါးချိတ်ကလေးမှာချွတ်ပြီး
မှီယုံဆိုလေးဘဲ ( မိုးကြိုးပြစ်မှီယုံဆိုလေးဘဲ )
ဖြစ်ပုံက မနေ့ကသောက်ထားတဲ့ ဘီယာအရှိန်လေးနဲ့ပုံမှန် ခရစ်စတယ်မဟုတ်ဘဲ
စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မထွက်လာဘဲ
ဒပ်ဘယ် အိပ်က်စ်ပလိုးရှင်းစစ်စတန် ( နှစ်ဆင့်ပေါက်ကွဲခြင်းစနစ် ) နဲ့
ဗျစ်ဘစ်ဘစ်ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲထွက်လာတာ ခြေစွပ်တွေဘာတွေပေကုန်ပါလေရော
ဖုန်းကလည်း မြည်လာပြန်ရော ဗမာသံ Ringtone ကြီးနဲ့
မှီကတော့ အပြင်ထွက်ရင်သာ အင်္ဂလိပ်ပုဆိုး ၀တ်တာ။ အိပ်ပြန်ေ၇ာက်တာနဲ့ ပါတိတ်လုံချည် ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးဝတ် ဂွတ်ပဲ။ လူက ပွင့်လောက် နီးနီးမို့ အင်္ဂလိပ်ပုဆိုး ၀တ်ထားရင် အနေအစား မချောင်ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့က လုံချည်လေးနဲ့မှ အဆင်ချောတယ်။ ဒါကြောင့် လုံချည်လေးကို တကူးတကမှာ ၀တ်ရတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ချည်ထည်ပုဆိုးမို့ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ဒါပေမယ့်တလောက မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ထမီဆင်တွေဝတ်ကြတယ်နော်။ယတြာခြေတာများလားမသိဘူးနော်
အခု နောက်ပိုင်း မြန်မာ မင်္ဂလာဆောင်တွေ လည်း
အနောက်တိုင်း ဝတ်စုံတွေ နဲ့ ပွဲထွက်လာကြ တာ
တော်တော်များများ တွေ့ နေရတယ်
နောက်ဆို ဘယ်လို များ ဖြစ်လာဦးမလဲ မသိဘူး
ပုဆိုး က တော့
ဝတ်လို့ ကောင်းလွန်းလို့ 
အိမ်နေရင်းဆို အမြဲဝတ်ဖြစ်တယ်ဗျို့ 
မြန်မာ အမျိုးသား မို့ပုဆိုးကိုပဲ…ချစ်ပါသည်။
ချစ်လို့.. ပုဆိုးနဲ့ကို.. အယ်လ်အေမြို့ ထဲ.. လမ်းသလားပြဖူးတယ်..။
ပင်လယ်ကမ်းသွား..ရေကူးတာတွေဘာတွေလုပ်ပြီးရင်လည်း.. သူများလူမျိုးတွေလို.. အကာအကွယ်ရှာတာတို့..ဘာတို့..မလို..လူရှေ့မှာတင်..ပုဆိုးနဲ့.. အ၀တ်လဲတာပဲ..။
အာဖရိက က တချို့ဒေသသူတွေလဲ ထမိန် ၀တ်ဆင်ပ်ါတယ်။
မြန်မာ ( ဗမာ+တိုင်းရင်းသား)ရိုးရာဝတ်စုံကို နှစ်သက်လို့ဝယ်ယူစုဆောင်း ၀တ်ဆင်ပါတယ်။
ဒီမှာ မြန်မာလို အ၀တ်ကောင်းပြီး တရက်တော့ ကျောင်းတခါးပိတ်သွားရော ကျန်သူငယ်ချင်းများက အင်္ဂလိပ်ပုဆိုး ကိုစီနဲ့ ( ကိုကတော့ တယောက်ထဲဆို တခါးကိုကျော်တက်မှာ သေချာပေမဲ့ ) လှူမျိုးနဲ့ ၀တ်စုံကို အခြားလူမျိုးတွေရှေ့မှာလေးစားသမှုနဲ့ သော့ရတဲ့ အထိစောင့်ရတာ ၁ နာရီလောက် သူများတွေကိုပါ အချိန်ကြန့်ကြာသွားစေလို့ နောက်ပိုင်းအတော် သတိထား၇တယ် ။
“ကိုစီနဲ့” အစား “ကိုယ်စီနဲ့” လို့ ပြင်ရေးလိုက်ရင် မြန်မာစာကိုပါ လေးစားရာ ရောက်သွားမှာပေါ့ နော်။ (ကိုယ်သိတာလေး ဆရာဝင်လုပ်မိပါသည်။)
ဟုတ်ကဲ့ MA MAကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ မြန်မာစာရိုက်တာရော ဗဟုသုတမှာပါ အားနည်းနေတာပါ ။ ဒီကြားထဲ ရိုက်နေရင်းနဲ့ ပျောက်သွားမှာစိုးတာပါ ပါသေးတယ် ။ နောက်ကိုဆင်ခြင်ပါ့မယ် ။
အပြင်ဘက်ရောက်နေသူတွေတော့ ပြောလိုပါဘူး..။ ဒီနေရာကွက်ကွက်လေးထဲ မှာနေတဲ့သူတွေပါ…။ အထူးသဖြင့်တော့ မြီးကောင်ပေါက်လေးတွေပေါ့ ဘောင်းဘောင်း ကျပ်ကျပ်လေးတွေဝတ်…။ ကားနဲ့ ရထားနဲ့သွား…။ ဟိုနားဒီနားထိုင်မရ…။ ခြုံကြီးကြီး လိုက်ရှာရတာလည်း တစ်ဒုက္ခ…။ တစ်ခါတစ်လေ လိုတာထက် ပိုပြီး တိုနေကျပ်ထုတ်နေတာတွေနဲ့ …………..
Even foralong time at abroad, I love ပုဆိုး. I have many ပုဆိုး and always wear ပုဆိုး at home except winter.
အပြင်ထွက်ရင် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ပါ(အလွယ်တကူချွတ်မရတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါသည်)
ပုဆိုးဒုက္ခက ဟိုင်းလတ်ကားတွယ်စီးရင်လည်း ကြုံရတယ်
မတော်တဆ ကားတွယ်စီးရင် ပုဆိုးကျွတ်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတော့….
ရွာသားများဆိုရင်ရော…. အရှက်နဲ့အသက် ဒီနေရာမှာ ဘာရွေးကြမလဲ
007 တော့ အသက်ကိုရွေးမယ်။ အသက်လဲမသေဘူး၊ ကြေငြာ ပြီးသားလဲဖြစ်။ကြော်ငြာခွန်တောင်သက်သာသေးတယ်။